health benefit | Ratopati
पुरुषले यसकारण खानुपर्छ नियमित रुपमा मखान, पाइन्छ यति धेरै लाभ access_timeअसार ११, २०७७
पुरुषको स्वास्थ्यसँग जोडिएका विभिन्न प्रकारको समस्याको उपचार घर बसीबसी नै गर्न सकिन्छ । घरेलु उपचारमा विभिन्न प्रकारका यस्ता खाद्य सामग्री छन् जसको नियमित रुपमा सेवन गरेको खण्डमा शरीरलाई विभिन्न रोगबाट सुरक्षित राख्न मद्दत मिल्छ । मखान यस्तै एउटा विशेष खाद्य पदार्थ हो जसको स...
चुरा लगाउँदाको वैज्ञानिक तथ्यबारे थाहा छ तपाईंलाई ? access_timeपुस १२, २०७६
चुरा जुनसुकै धातुबाट बनेपनि अन्त्यमा यो हातको सुन्दरता बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । विशेषगरी विवाहित महिलाले चुरा लगाउँछन् । यद्यपि, चुरा लगाउनुका वैज्ञानिक कारण पनि छन् भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर चुरा लगाउनुको धार्मिक महत्व त छँदै छ यसका वैज्ञानिक लाभ पनि छन्...
चिसो मौसममा तरुल खानु किन फाइदाजनक मानिन्छ ? थाहा पाउनुस् यसका चार फाइदा access_timeपुस ९, २०७६
तरुल चिसो मौसममा नै फल्ने गर्छ र यो स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । तरुल गर्मी प्रदान गर्ने तरकारी भएकाले यसलाई चिसो मौसमका लागि निकै उत्कृष्ट खानेकुरा मानिन्छ । चिसो मौसममा तरुल खानुका फाइदाबारे जानकारी लिऔं । फाइबरयुक्तः तरुल फाइबर अर्थात् रेशाले भरि...
मोटा व्यक्ति र मधुमेह रोगीका लागि बरदान हो भन्टाः थाहा पाउनुहोस् कसले खाने, कसले नखाने access_timeभदौ १९, २०७६
भन्टा धेरैलाई मन नपर्न सक्छ तर यसमा विभिन्न आयुर्वेदिक गुण पनि हुन्छ जुन खानुका विभिन्न फाइदा छन् । विशेषगरी जसले तौल कम गर्न चाहिरहेका छन् र जसलाई निद्रा सम्बन्धि समस्या छ, उनीहरुका लागि भन्टा कुनै बरदानभन्दा कम छैन । थाहा पाउँदा अचम्म लाग्ला तर यो सब्जीमा एन्टिअक्सिडे...
आलुको बोक्रा फ्याँक्न बन्द गर्नुहोस्, यी रोगका लागि छन् फाइदाजनक access_timeभदौ १, २०७६
आलु यस्तो तरकारी हो जुन लगभग सबैजसो तरकारीमा मिसाउने गरिन्छ । धेरैले आलु ताछेर पकाउँछन् तर धेरैलाई थाहा छैन कि फ्याँकिने आलुको बोक्रा विभिन्न पोषक तत्वले भरिपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्यमात्र होइन सौन्दर्यका लागि पनि काम लाग्छ आलुको बोक्राः आलुको बोक्रामा क्याल्शियम, भिटा...